Shenzhen KingTop Technology Co., Ltd.e hiwere na 2004, locates na Shenzhen nke nwere ahụkebe uru zuru ụlọ ọrụ yinye na-adaba adaba njem. KingTop bụ otu ọkachamara PCB & PCBA ụlọ ọrụ mmepụta ihe na China. Nye circuit imewe & App mmepe ọrụ maka ndị ahịa. Ma nwee ndị R&D, usoro mgbakọ iji zụlite ma mepụta ọtụtụ ngwaahịa elektrọnik maka mbupụ.
KingTop nwere 3500 square mita ájá-free ogbako, n'elu 120 ọrụ, 10 technicians, 8 engineer. Ngwuta ngwa oru di elu, dika YAMAHA YS24, YSM10, YS12, YG200, YV100XGP, 4sets AOI (ntanetị AOI), X-RAY Welding Spot Inspection Machine (BGA, PoP, CSP, QFN, Flip Chip, COB), 3D SPI (Automatic nnukwu ọsọ 3D solder tapawa nnyocha usoro), Reflow Oven na Wave solder Machine (n'elu 6sets zuru-akpaka SMT edoghi), na THT mmepụta edoghi. Lọ ọrụ arụ ọrụ dabara na sistemụ ISO9001.
Tụkwasịnụ PoP (ngwugwu na ngwugwu) IC stackup elu nkenke nhazi chọrọ. Anyị nwere ike ịgbakọta 0201 / 01005chip na QFP / BGA / QFN pitch 0.2mm. Tụkwasịnụ HDI osisi na kacha nta site na size 0.1mm, kacha nta Chọpụta 0.075mm, kacha nta ohere 0.075mm, Blind-lie via. Igwe eji emeghari onodu ubochi nwere okpomoku iri iji meziwanye nguzozi na idi nma.
All PCB, PCBA nke Industrial agbakwunyere PC, Kọmputa mainboard, Isiokwu PC, Solar Energy, AI, UAV, Robotic, Display, Digital electronic, Professional music device, POS, Security, Smart electronic, Smart Home, EV chaja, GPS, IoT, Onye na-ahụ maka ihe ọkụ ọkụ na - ahụ maka ya na ngwa igwe, wdg.